China 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama Supplier na Nlụpụta | ma ọ bụ
Cell omenala efere
Cell omenala karama
Cell Culture anụ ahụ omenala
Dịanyā dị iche iche ezi price plastic eppendorf ...
Dị iche iche Agba Plastic Micro Pipette NDỤMỌDỤ
Ụlọ nyocha ọgwụ price plastic disposable akpali mmasị iko m ...
Plastic 15ml Laboratoty Centrifuge tube na ịghasa Cap
Elu àgwà disposable akpali mmasị 70mm Petri efere cont ...
75mm disposable lab Petri efere na ntị
ISO & OA mma disposable plastic ma ọ bụ iko 150m ...
50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama
anụ ahụ omenala karama
Shandong, China (Chile)
50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu lab plastic anụ ahụ omenala karama
Plastic cell anụ ahụ omenala karama
Uzo plastic cell anụ ahụ omenala karama
Akara cover na akpụkpọ ahụ cover
Laboratory research ngwá
Mere nke 100% amaghị nwoke polystyrene cell anụ ahụ omenala karama
Gamma ụzarị, elektrọn doo, UV nwoke ịga ụlọ ọgwụ
Ma ọ bụ ma ọ bụ ahaziri
50000 Ibe / iberibe kwa Day laabu plastic cell anụ ahụ omenala karama
Qingdao port laabu plastic cell anụ ahụ omenala karama
Pịa na ederede na ịzụta " 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama"
Cell ngwaahịa tumadi na-agụnye cell omenala efere , cell omenala efere na cell omenala karama .Onye ngwaahịa size na style zuru oke, nwere ike izute ahịa ina.
Cell omenala karama ime a dịgasị iche iche nke oru nhazi, dị ka ala protein adsorption, TCT / oxygen plasma, na ngwakọ plasma, nsụkọta obibi with.The Cell omenala karama nwere ike melite cell ibu environment.More eme ka cell nkwusioru omenala na Stick a mgbidi cell omenala. Cell omenala karama nwere ike isi nweta cell proliferation enweghị iche. Cell omenala karama nwekwara ike-eji maka collection na nchekwa nke obere n'omume.
Maka ozi ọzọ na cell omenala technology na Cell omenala karama, biko kpọtụrụ m ozugbo. Email: 18863608211 (@ 163.com). Ma ọ bụ pịa na ederede ịkpọtụrụ m.
Anyị na-emepụta " 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama" na-dị ngwaọrụ na nwere onwe ha mma nnyocha otu, àgwà na-ekwe nkwa.
Cell omenala karamanwere a dịgasị iche iche nke usoro họrọ from.Our cell omenala karamatechnology e mepụtara site anyị onwe anyị r & d otu maka ọtụtụ afọ. Ị nwere ike ịzụta ke nnukwu, anyị ji obi n'oru mmadụ
Pịa ịzụta " 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama"
25ml Cell omenala karama
25ml Cell omenala karama(breathable cell omenala karama)
50ml Cell omenala karama
75ml Cell omenala karama
75ml Cell omenala karama(breathable cell omenala karama)
250ml Cell omenala karama
600ml Cell omenala karama
" 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama" nwere elu ọgwụgwọ na untreated abụọ nhọrọ. Cell omenala karamanwere ike Cell nkwusioru omenala na Nọgide a mgbidi cell omenala.
Cell omenala karama ọkpụrụkpụ bụ edo, n'elu bụ ire ụtọ.
The " 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama" nwere ihe abụọ nkọwa: akara cover na akpụkpọ ahụ cover.
The akpụkpọ ahụ cover nwere ike melite breathable nke cell omenala karama.
The kpọmkwem gburugburu n'olu nke cell omenala karama -enye ohere okpu bugharia ngwa ngwa n'ime ọnọdụ.
The cell omenala karama n'olu n'akuku-eme ka pipette mfe.
The ikwo ihe arenaceous nke ebe cell omenala karama n'olu na-adị mfe akara.
The ihe nke " 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama" bụ Ọma.
The elu zita udi nke cell omenala karama e mere na-eme ka ọtụtụ ndị a pụrụ isi chọta kwụsie ike.
Cell omenala karama nwere ike stacked, n'ụzọ dị irè na-azọpụta ohere.
Anyị nwere ndị ọzọ na ngwaahịa e wezụga " 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama" .You need medical supplies and lab supplies to contact me directly.
" 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama" nwere ike etinyere Chemical Laboratory, ụlọ ọgwụ, ezinụlọ, ụlọ akwụkwọ, wdg
Qingdao jindian bụ a ụtụ na-eme nnyocha, ekele ha raara onwe ha.
Anyị ga-anọgide na-ebu na nkwenkwe nke na-elekwasị anya àgwà na-emepụta ihe na àgwà ngwaahịa.
Qingdao ma ọ bụ Co., Ltd. a hụrụ na 1992, headquarter na Taiwan na mmepụta isi ke Qingdao. Ọ na-pụrụ iche na-n'ichepụta disposable ọgwụ testing products.AMA eguzobewo a dum set nke siri ike n'ime àgwà akara usoro gabiga ISO9001, ISO13485 na OA ihu ọma.
Ma ọ bụ mere ka n'ịrụzu oké ihe: Ọ bụ agụụ ọbara tube ,ule tube ,Petri efere,Cell omenala karama na anụ ahụ omenala na-ukwuu ụtọ, karịsịa na United States, Japan na Jordan ahịa.
Ziga m adreesị gị. Anyị ga-anapụta " 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama" na gị na aka.
Professional technical imewe ga na-akwado gị zụọ ọmụma, kọntaktị 18863608211 (@ 163.com) maka ozi ndị ọzọ banyere " 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama" .
Kpọtụrụ 18863608211 [@] 163.com for more products.
Previous: Medical lab plastic akpali mmasị na-ekpo ọkụ anụ ahụ cell omenala efere
Osote: 50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu plastic anụ ahụ omenala karama karama
90mm X 15mm igba ogwu na Petri Cell anụ ahụ Culture nri
Cell anụ ahụ Culture
Petri Cell anụ ahụ Culture Nri
anụ ahụ Culture Mesoo Cell Culture efere
Medical lab plastic akpali mmasị 96 ọma anụ ahụ cell ...
Factory wholesaler price 48 olulu plastic dispo ...
Medical lab plastic akpali mmasị 6 ọma cell omenala ...
Ụlọ nyocha plastic 96 olulu cell anụ ahụ omenala efere
50ml 250ml akụkụ anọ canted n'olu laabu p ...
Nke 398E-5, Jiaozhou West Road, Zhongyun 2nd Industry Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong Province, China